Afghanistana Aorian’ny 2014: Mbola Hiverina Ve Ireo Andro Manjombona? · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 29 Oktobra 2012 9:27 GMT
Vakio amin'ny teny Español, عربي, Français, 한국어, Ελληνικά, Italiano, 日本語, Deutsch, English
Tamin'ny 7 Oktobra 2012 lasa teo no nitsingerina ny faha-11 taona nisian'ny ady notarihan'i Etazonia tao Afghanistana. Tokony handao ny firenena ny tafika iraisam-pirenena amin'ny fiafaran'ny taona 2014, na dia mbola “tsy tontosa aza ny ady“. Taorian'ny taona maro nisian'ny ady, voatery hiala ny tafika OTAN ary hamindra ny andraikitra ho an'ny tafika Afghana amin'ny fiarovana ny firenena. Na dia izany aza, ho hita eo raha mahavita mametraka ny fandriampahalemana sy ny filaminana ny tafika Afghana aorian'ny fanesorana ireo tafika vahiny?
Ny ampitson'ny 9/11, nanani-bohitra tao Afghanistana ny tafik'i Etazonia sy ny namany OTAN mba handrava ny fitondrana Talibana sy ny lehiben'ny al Qaeda. Taorian'ny ady naharitra herinandro maro, vitan'ny tafika OTAN ny nandroaka ny Talibana tamin'ny tanàna maro ary nanampy tamin'ny fametrahana firenena vaovao demokratika izy ireo — Repoblika Islamika Afghanistana.
Naseer, mponina ao Kabul nanoratra hoe [fa]:
Tahmina Barakzay, mpampianatra vehivavy monina ao Kabul, nanoratra hoe [fa]:
Zmaray Zalmay, mpiasa mpanao asa soa 30 taona monina ao Kabul nilaza hoe:
Tsy mitovy hevitra ny Afghana rehetra. Maro ireo tsy resy lahatra amin'ny ilàna ny tafika OTAN ao amin'ny firenena. Ohatra, Ghulam Habib, mpikambana ao amin'ny Filan-kevitry ny Distrikam-paritra ao amin'ny faritry Takhar nanambara hoe:
Nampitandrina ny tatitra vao haingana avy amin'ny Vondrona Iraisam-pirenena misahana ny Krizy [International Crisis Group] (ICG) fa mety hirodana ny governemanta Afghana aorian'ny fanesorana ny tafika. Ary maminavina ihany koa ny sasany fa mety hisy ny fifandonanana ara-poko ao amin'ny firenena.
Ho famaliana izany tatitra izany, hoy ny fanambarana avy amin'ny governemanta Afghana nilaza:
Jan Kubis, iraky ny Firenena Mikambana nanohitra izany faminaniana izany hoe hirodana i Afganistana aorian'ny taona 2014. Hoy i Kubis nilaza:
Frogh Wazhma, mpiaro ny zon'olombelona, sy Afghana manam-pahaizana manokana momba ny vehivavy sy ny fampandrosoana, nitsikera tao amin'ny Twitter:
Vatsian'ny International Security Network (ISN) ity lahatsoratra (teny anglisy) ity sy ny dikantsorany amin'ny teny frantsay, arabo ary espaniola ho fiaraha-miasa amoahana ny feon'olo-tsotra eo amin'ny fifandraisana iraisam-pirenena sy ny filaminana ankapobeny. Tao amin’ny bilaogy ISN no navoaka voalohany ny lahatsoratra ary azona jerena eto ireo tantara hafa mifandraika amin’izany.